Xaflad lagu mamusayo biladii la gudoonsiyay abwaan Hadraawi oo lagu qabtay Burco sawiro | Salaan Media
Xaflad lagu mamusayo biladii la gudoonsiyay abwaan Hadraawi oo lagu qabtay Burco sawiro
(SM-Burco) Xaflad baladhan oo lagu mamusayay Biladii la siiyay abwaanka Maxamed ibraahin Warsame (Hadraawi) ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hotel Golis Ee Magalada Burco.
Munaasibadani oo ahayd mid aad u baladhan ayaa waxa ka soo qayb-galay abwaan hadraawi oo ah Masuulka loogu debal-degayay guushani uu gaadhay.Qoraa Siciid Jaamac.Ayaan Maxamed Cashuur,Madaxda Golaha Degaanka Burco.abwaano.Qoraayo.Aqoon-yahano.iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan.
Ugu horaynba waxa munaasibadani hadal ka soo jedisay ayaan Maxamed Cashuur oo ka mid dadka soo qaban-qabiyay xafladani loogu debaal-degayo guusha uu dhinaca fanka ka gadhay abwaan hadraawi.
Waxaanay ayaan cashuur shegtay inuu abwaanku yahay shakhsi mudan in lagu daydo isla markaasna laga faidayso Aqoon-tiisa waayo-aragnimo ee dhinaca fanka.
sidoo kale mr ayaan halkaasi ku soo bandhigtay buug uu abwaan hadraawi ku qoray afka somaliga isla markaasna ay dad ajahab ahi u bedaleen Luuqada ingirisada.
Maayir ku xigeenka degmada Burco Muxumed Xasan Jamac (Xoday) ayaa isna dhinaciisa soo dhaweyay biladani ay dowlada holland gudonsisay abwaan hadraawi.waxaanu maayir ku xigeenku halkaasi si toosa u balan-qaaday inay dowlad hoose ahaan ay hirgalin-donaan dhismaha library cusub oo ay yeelan-doonto magalada burco.
Mamulaha shirkada isgadhsinta Telesom Maxamuud Xaji ibraahin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmamay inay guul u tahay ummada reer s/land in abwaan hadraawi uu caalamku gudonsiyo bilad.waxaanu mamuluhu sidoo kale shegay inuu abwaanku qayb muhiim ah ka qaadan karo ictirafka ay s/land ka donayso beesha caalamka.
Qoraa Siciid Jaamac oo isna munaasibadani ka hadlay ayaa soo bandhigay guulaha uu dhinaca suganta uu abwaan hadraawi ka gadhay.
waxaanu abwaanku halkaasi sharaxaad ka bixiyay buugani uu qoray hadraawi ee loo turjumay luqada ingirisada.
Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isu-duwaha wasarada cafimadka g/togdheer Dr: Cabdi Yasiin.Xildhibaan mubarig Yuusuf Cilmi (Bidhi) Proff Hinda jamac.Masuul ka Socday Jamacada addis University.
waxaanay dhamantood abwaanka ku amanay doorka fiican ee uu ka qaado sidii loo horumarin-lahaa sugaanka somalida.
Ugu Danbayntii waxa halkaasi ka hadlay abwaan Maxamed ibraahin Warsame (Hadraawi) oo ah masuulka lagu mamusayay xafladani.waxaanu abwaanku amaan baladhan usoo jediyay cid kasta oo soo qaban-qabisay munasibadani.
waxanu abwaanku kula dardarmay dadkii munasibadasi ka soo qayb-galay inay ka dheradan qabyalada oo uu shegay inay samayn baladhan ku yeelan-doonto mustaqbalkaga danbe.